Ampiasao ny farango amin'ny Claw Stars hamonjy hamsters | Androidsis
Claw Stars dia tsangambato mahaliana navoakan'ny Appxplore tamin'ny beta ampahibemaso ary amin'izany dia apetraka amintsika amin'ny fibaikoana ny sambo iray izay baikoin'ny hamsters mahafinaritra. Manana iraka hamoaka ny farangoany izy hanangonana zavatra isan-karazany izay manampy azy hanavotra ireo namany namany izay nalefa tany amin'ny habakabaka tsy manam-petra noho ny fitsapana tafavoaka velona.
Kilalao niasa tsara hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany Ary izany dia mitarika antsika any amin'ilay mekanika mampiankin-doha hitantsika tao amin'ireo masinina sasany izay matetika any amin'ny valan-javaboary fialamboly. Eny, mamindra ny farango hametraka azy amin'ny toerana izay tsy maintsy andramantsika haka saribakoly na zavatra iray hafa mba hahazoana azy io ho loka. Ataovy.
1 Ampio ny hamster amin'ny fintana
2 Claw Stars dia freemium madio
3 Avereno ny planeta
Ampio ny hamster amin'ny fintana
Avy amin'ity fotokevitra fampiasan'ny farango hakana zavatra samihafa, ny mahery anay dia manetsika ny sambony hitady ireo zavatra mamela antsika hanohy handroso tsara. Mora toy ny manetsiketsika ny leveran'ny fivezivezena any aoriana izany ka amin'ny fotoana iray dia manindry ny bokotra hook isika, ary misintona midina hisambotra zavatra iray izy io.
Ity no fomba anehoana antsika tranga tsy mampihomehy ary amin'izany izany singa multiplayer izany dia tsy tsy ampy ihany koa amin'ny alàlan'ny "fakana an-keriny" hamsters efa nangonin'ny mpilalao hafa. Mazava ho azy fa tsy maintsy miaro ny antsika isika amin'ny fahaiza-manao isan-karazany izay ho azontsika avy amin'ny sombin-javatra sasany izay angoninay amin'izany fintana izany.
Ka ny antsika hamster mandroso mandra-pahazoanao farantsakely bebe kokoa, hamsters bebe kokoa ary manandrana mamarana ny tanjony hanavotana ireo namany namany izay saika maty rehefa nampiasaina tamin'ny andrana velona.
Claw Stars dia freemium madio
eto fa tsy angovo dia manana farango isika. Midika izany, indraindray dia ho feno ny isan'ireo farango azontsika ampiasaina hanangonana ireo zavatra mamela antsika hanavotra hamsters na hahazo fahaiza-manao samihafa hiarovana ny antsika manokana na hialana amin'ireo an'ny mpilalao hafa.
Like manana safidy hanatsara ny farango izahay ka afaka manangona zavatra lehibe kokoa izy rehefa mahatratra sombin-javatra voangona manokana. Ka izao no anehoana antsika ny lalao na mekanika lalao izay ampifandraisintsika hatramin'ny fotoana voalohany.
Lazainay izany satria vita tsara ny fizika zavatra ary betsaka kokoa na latsaka raha haintsika ny mamela ny hamster protagonista anay amin'ny toerana tena izy, afaka hamoaka ny farango isika hanangonana ireo zavatra ireo. Ireo zavatra izay matetika no tsara indrindra amin'ny lalina kokoa, ka tsy misy safidy afa-tsy ny mampiasa farango maromaro hahatratrarana azy ireo.
Avereno ny planeta
Miaraka amin'ireo vola samihafa ireo dia manana ny fahaizana mamerina amin'ny laoniny ny planeta ao amin'ny Claw Stars. Izany hoe, afaka mameno ny habaka banga amin'ny tranobe sy zavatra mahaliana isika ary hamerina amin'ny laoniny ireo planeta ireo ho toy ny iraka manan-danja hafa ananantsika amin'ity fialamboly mampihetsi-po ity.
Raha ny fahitana azy dia ampy tsara izany mba tsy hananantsika amin'ny fotoana rehetra ny fahatsapana fa mpankafy azy io. Zava-dehibe amin'ireo karazana lalao ireo ny famolavolana toetra, mekanika, menus ary ny efijery dia mirindra. Fa ny ankamaroan'ny farango dia ny zava-misy amin'ny fanangonana ireo zavatra ireo amin'ny farango izay azontsika atao koa ny mampitombo ny habeny.
Claw Stars dia fiankinan-doha mahazatra tonga tamin'ny dingana beta ho an'ny daholobe ho an'ny Play Store ary izany tamin'ny voalohany dia manana ny mari-tsofina rehetra izay rehefa mandeha ny fotoana dia ho lasa lalao lalaovina be izy ity. Ny loko mazava, ny mahafinaritra ary ny mavitrika ary ny mekanika hook izay efa fantatsika dia mety tsara. Mandao anao izahay miaraka amin'ny mahazatra hafa miaraka amin'ny mekanika mampiankin-doha.
Izy io dia efa manana mekanika mandresy miaraka amin'ny farango. Ny ambiny dia manampy amin'ny famitana traikefa filalaovana freemium malala-tanana.
Mampihomehy ny farango
Be zavatra isan-karazany hanangonana amin'ny farango
Mahafinaritra ny famolavolana ny toetran'izy ireo
Ny fahatsapana fa ny mpilalao amin'izao fotoana izao dia tsy mpilalao (sarin'izy ireo)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ampio ilay mpihetsiketsika hamster an'ny Claw Stars hanavotra ireo sakaizany namany amin'ity fiankinan-doha mahaliana ity
Proton Kalandrie, safidy hafa miafina amin'ny Google Kalandrie, miditra beta amin'ny Android